Nestle NaturNes Bio Banana Banana na Karọt 90G 4M + - Flọ Ahịa ASFO
Nestle NaturNes Bio Banana ugu ihe ...
Nestle NaturNes Bio Banana Pumpkin na Carrot 90G 4M +
NaturNes Bio Pumpkin Banana Carrot bụ ụzọ dị mma iji nye mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri pụrụ iche nwa gị ma were ya ebe niile. Adabara ụmụ ọhụrụ si 4 ọnwa na onye format 90g, na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri organically toro, akọ na họrọ karịsịa maka nwa ọhụrụ nri.
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri maka nwa NaturNes Bio Pumpkin Banana Carrot bụ oke nhọrọ ịmalite mmalite nke ngwakọta nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na nri ụmụaka na ụdị ngwugwu na-enye gị ohere iwere ya ebe niile. Emepụtara nkwakọ ngwaahịa ahụ nke ọma iji gbaa ụmụ ọhụrụ toro eto ume ka ha mụta iso nanị ha na-eri nri. Ejiri mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị elu wee mepụta ma họrọ ọkachasị maka nri nwa na enweghị agba okike ma ọ bụ ihe nchekwa.
Packet NaturNes Bio Pumpkin Banana Carrot bụ ụzọ ziri ezi na nke bara uru iji nyefee nwa gị uru nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'oge ọ bụla. Enweghị shuga agbakwunyere, nke nwere naanị sugars na-apụtakarị na ngwugwu ọ bụla NaturNes Bio bụ otu mkpụrụ mkpụrụ osisi, na-enye ederede dị ezigbo ụtọ na ụtọ ụtọ iji mejuo nnukwu pasta!
Site na ntinye iji nye ihe ndi sitere na mbido ihe ndu, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mepụtara na NaturNes Baby Bio Pumpkin Banana Carrot, nke ejiri ugu ugu mee, banana na karọt, 100% sitere na ndu.